भैरहवाको आकाशे पुल क्या गज्जब ! काठमाडौँले सिक्नुपर्ने – MySansar
भैरहवाको आकाशे पुल क्या गज्जब ! काठमाडौँले सिक्नुपर्ने
Posted on September 24, 2019 September 24, 2019 by Salokya
भारतको सुनौली हुँदै नेपालको बेलहियाबाट भैरहवा हुँदै बुटवलमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने लगभग ३० किलोमिटरको बाटो अहिले गजबको बनेको छ। यो ६ लेनको बाटोमात्र गजब छैन, त्यसमाथि बनेका आकाशे पुल पनि मलाई त गजब लाग्यो। हाम्रो काठमाडौँमा आकाशे पुल हुन् कि सपिङ कम्प्लेक्स बनेका हुन्, झुक्किनु पर्ने हुन्छ। पुलमा सटर निकालेर पसलहरु भाडामा लगाइएका हुन्छन्। तर भैरहवाको पुलमा त्यस्तो थिएन।
भैरहवाको देवकोटा चोकबाट अघि बढ्दा देखिएको एउटा आकाशे पुल चढ्ने क्रममा देखियो, त्यहाँ त दुई वटा विकल्प हुँदा रहेछन् चढ्ने। एउटा भर्‍याङ चढ्ने, अर्को ह्विलचेयर गुडाउन मिल्ने बाटो।
भर्‍याङबाट नभई त्यसबाट चढ्दा अलि सजिलो पनि हुने रहेछ।
यस्ता आकाशे पुलहरु यो सडकमा धेरै वटा बनाइएका रहेछन्। पुल राम्रो भए पनि त्यसबाट हेर्दा मुन्तिर भने राम्रो देखिएन।
यो ठाउँमा हरियाली हुनुपर्नेमा पानी जमेर लामखुट्टे हुर्कने वातावरण मिलाइएको रहेछ। फोहर पनि थियो।
काठमाडौँमा भए कतातिर सटर निकाल्न सकिन्छ भनेर डिजाइन गरिन्छन् आकाशे पुल। अनि कहाँबाट यस्तो संरचना बनाउन सकिन्छ त।
मुख्य चार लेन सडक र दायाँ बायाँ दुई वटा सर्भिस लेन। खाली कपिमा सीधा धर्को तानेको जस्तो बाटो भएकोले भक्तपुर र चक्रपथको जस्तो ६ लेनको बाटो यो हैन। तर यहाँ पनि बीचबीचमा बाटो काट्नेहरु हुन सक्ने भएकोले सावधान भने उत्तिकै हुनुपर्ने रहेछ।
र, जाँदाजाँदै आफ्नै पनि प्रचार। देवकोटा चोकमा उभिएर फोटो खिच्ने रहर
1 thought on “भैरहवाको आकाशे पुल क्या गज्जब ! काठमाडौँले सिक्नुपर्ने”
लौ सालोक्य जी हाम्रो शहर भैरहवा पुग्नु भएछ I आकाशे पुलको डिजाइन ( विदेश तिर जस्तै ) राम्रो बनाएको मा राम्रो डिजाइनको प्रशंसा गर्ने पर्छ तर टायल ओछ्याउने ले अलि फोहर गरेर, सिमेन्ट राम्रो सफा नगरी लगाएको रहेछ I रह्यो डेंगु को बास स्थल, मलाई पनि मन परेन I सम्बन्धित निकाय लाइ कपि पेस्ट गरिदिएको छु Iभैरहवा को समाचार समेट्नु भएको मा यहाँ लाइ साधुबाद I